प्रधानमन्त्री देउवाले एयरपोर्टमै हप्काएका थिए गृहमन्त्री खाँडलाई – Dcnepal
प्रकाशित : २०७८ कार्तिक २३ गते १०:२७
काठमाडौं। बेलायतबाट फर्कँदा फर्किँदै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानास्थलमै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यतिन्जेलसम्म कार्यवाहक प्रधानमन्त्री भनेर प्रचार गरिएका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई झपारेको पाइएको छ।
कात्तिक १८ गते विहान प्रधानमन्त्री देउवाले विमानबाट उत्रनासाथ आफूलाई स्वागत गर्न पुगेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडमाथि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री भन्दै दशतिर किन घुमेको? कस्ले घुम्नु भन्यो? त्यो डडेल्घुरा किन गएको? भन्दै भेट्नासाथ आक्रोश पोखेका थिए।